Axmed C Salad: Dad badan ayaannu u haynaa dilalkii laga fuliyay Gaalkacyo 2-dii sano ee la soo dhaafay. – Radio Daljir
Axmed C Salad: Dad badan ayaannu u haynaa dilalkii laga fuliyay Gaalkacyo 2-dii sano ee la soo dhaafay.
Galkacyo, Feb 28 – Guddoomiyaha gobolka Mudug G/lle sare Axmed Cali Salaad ayaa sheegay in ay gacanta ku hayaan dada badan oo isugu jira reer Puntland, Soomaali kale iyo waliba ajnabi kuwaas oo loo hayo tuhummo la xiriira dilal laga fuliyay xarunta gobolka ee Gaalkacyo.
Guddoomiye Salaad ayaa sidaa ka sheegay kullan ballaaran oo maanta lagu qabtay xarunta gobolka, loogana hadlayay sugidda ammaanka magaalada Gaalkacyo iyo dowrarka ay arintaa ka cayaari karaan dawladda iyo qaybaha kala duwan ee shacabka. Kulankan oo ahaa kii ugu muhiimsanaa noociisa oo ka dhaca gobolka ayaa waxa ka soo qayb-galay madax sare oo ka socota dawladda Puntland, siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka, nabaddoono iyo xubno ka socday bulshada rayidka ah.
Mudane Axmed Cali Salaad ayaa sheegay in kadib muddo laba sano ah oo lagu ugaarsanayay qaybaha kala duwan ee dadka wax-ku-oolka u ah ay dawladdu ku tallaabsatay howl-gallo ammaan oo aad u abaabulan laguna guulaystay in la soo qabto caruur iyo dadwaawayn oo reer Puntland ah kuwaasoo ka shaqeeyay, sida uu hadalka u dhigay in nala laayo oo la soo raaco dad soo burburiyay qaybihii kale ee Soomaaliya kuna shaqeeynaya afkaar laga soo waariday waddamo shisheeye.
Wasiirka Shaqada iyo Shaqaalaha Puntland Cabdiwali Indhaguran ayaa isaguna sheegay in wafdiga ka socda dawladda dhexe ay u yimaadeen codsi ka yimid guddoomiyaha gobolka isla markaana loogu hiilliyo inta wanaagga wadda. Wasiirku waxa uu si wayn uga hadlay ahamiyadda nabadda isaga oo sheegay in ay tahay arrinta kaliya ee lagu midaysan yahay.
Mudane Indhaguran ayaa sheegay in inta la isku raacsan yahay ay ka badan tahay inta la isku khilaafsan yahay oo ay siyaasaddu ugu horeeyso. Wasiirku waxa uu ku celciliyay in inta yar ee nabadda lidka ku ah haddii ay ka qaalib noqdaan inta badan kallifi karaan qax iyo barakac, sidaa darteedna ay waajib tahay in dhinac looga soo wada-jeesto.
Nabaddoonnada iyo haweenka oo ku hadlay magaca bulshada rayidka ah ayaa isku raacay in tallaabada dawalladda ee xilligan timid ay soo daahay, balse ay tahay tallaabo lagama maarmaan ah ayna aad u soo dhaweeynayaan. Nabaddoon Xuseen Cali Dude ayaa dawladda ugu baaqay in ay dambiilayaasha mariyaan caddaalad rasmiya oo muuqata, dhinaca kalena waxa uu dadwaynaha ugu baaqay in dawladda loo ogollaado fulinta sharciga. Dahabo Maxamed Barre ayaa iyaduna dhinaceeda sheegtay in ay shacab ahaan u baahan yihiin bilays, xabsi iyo dawlad awood u leh fulinta sharciga.
Shirkan oo ay soo qabanqaabiyeen ururada PDRC iyo MPI oo labaduba ah ururo ka shaqeeya samaynta iyo ilaalinta nabadda ayaa waxa mas?uuliyiinii ka soo qayb-galay ka mid ahaa wasiir-ku-xigeenka arimaha gudaha mduane Cali Yuusuf Cali, madaxwayne ku-xigeenkii hore ee Puntland Maxamed Cali Yusuf iyo la taliyaha madaxwaynaha Puntland ee arrimaha ammanaka Jeneraal Cabdullaahi Cali Mire Carays.
Magaalada Gaalkacyo oo indhawaalaba masrax u ahayd dilalka mas?uuliyiinta dawladda iyo shakhsiyaadka wax-ku-oolka ah ayaa haatan waxa ka socda howl-gallo ammaan oo aad u baahsan kuwaas oo lagu sugayo ammanaka.
Farxan James Cabdille